Xubnaha Barlamaanka Somaliya ee diidan guddoonka oo gaashaanka ku dhuftay codsi uga yimid Madaxweynaha. – Radio Daljir
Abriil 26, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Apr 26 – Xubnaha Baarlamaanka Somaliya ee aaminsan in guddoomiyaha iyo ku xigeenadiisu dhaceen ayaa maanta ku gacansarey codsi uga yimid madaxweynaha oo uu ku dalbanayey inay ka laabtaan go’aanka ay ku doonayaan in laga takhaluso guddoonka baarlaamka, lana doorto guddoon cusub.
Arrintaan ayaa timid ka dib markii maanta madaxweynhuhu kula kulmay magaalada Muqdisho in ka badan 300 oo xildhibaan oo ku doodaya in baarlamaanku uu doorto guddoon cusub, maadaama uu xilkii ka dhamaaday guddoonkii hore, sida ay wakiiladaasi qabaan.
Madaxweynaha ayaa si dabacsan uga codsaday xildhibaanada inay ka aqbalaan codsigiisa, ayna joojiyaan mooshinka ay ceyrinyaan guddoomiyaha maadaama uu dhici karo khal-khal siyaasadeed oo khatar galinkara jiritaanka dawladda, buu yiri madaxweynuhu, balse xildhibaanada ayaa ku dooday inay arrintaasi sameyn karin, maadaama waxa meesha yaalla uu yahay sharci kaas oo cid kasta ka adag, sida ay sheegeen.
Ciidamada Faransiiska oo odayaal burcar badeed ah ku wareejiyey dawladda Puntland.